Yechipiri yeruzhinji beta ye macOS 10.14.5 uye tvOS 12.3 ikozvino yavapo | Ndinobva mac
Iyo yechipiri yeruzhinji beta yemacOS 10.14.5 uye tvOS 12.3 yave kuwanikwa
Ivo vakomana veCupertino, vachive vechinyakare vhiki nevhiki kwavakatijairira, vachangobva kuvhura inoenderana yeruzhinji beta yemaviri macOS eIOS uye tvOS. Pane ino nguva, uye senguva dzose sezvo isiri chikamu cheveruzhinji beta chirongwa, watchOS haiwanikwi.
Tiri kutaura nezvazvo MacOS shanduro 10.14.5 uye tvOS 12.3. Chero chero mushandisi ari chikamu cheveruzhinji beta chirongwa cheese macOS uye tvOS anogona ikozvino kurodha pasi iyo yekuvandudza kuburikidza neSoftware Updates chikamu chese ari maviri masisitimu anoshanda.
Panyaya yenhau dzatinoona muTVOS 12.3, sekuIOS 12.3, tinowana iyo TV application, chishandiso chakagadziriswa zvachose kugadzirisa nyaya dzese dzichiri kuuya kubva mukushambadzira vhidhiyo sevhisi yeManzana, yakatumidzwa zvisina tsarukano Apple TV +.
Uye zvakare, iyi beta nyowani inotipawo rutsigiro rweMatanishi, iyo-inodikanwa terevhizheni iyo Apple ichatipa, kutanga mukudonha zvingangodaro mune zvese zvingangoita, uye izvo zvichatibvumidza kubhadhara isu pachedu kune chiteshi kana masevhisi atinoda ona, pasina kushandisa tambo kana kunyorera masevhisi.
Nezve macOS 10.14.5, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakanangana nekuvandudza zvese mashandiro uye kugadzikana kweiyo inoshanda sisitimu inotarisira maMac.Mukureva kwekushandisa kana mabasa, isu hatina kuwana chero chitsva chekuburitsa, chimwe chinhu chine musoro tichifunga kuti zuva reWWDC 2019 rave kuswedera uye kuswedera.
Munguva yekupemberera kweWWDC 2019, Apple ichaunza zviri pamutemo zvizhinji zve mabasa anouya kubva muruoko rweanoshanda masystem iyo inogadzirisa zvese zvishandiso izvo zviripo paruzhinji kuruzhinji, chiitiko chatichanyatso tevera segore rega rekukuzivisa iwe nezvese nhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Iyo yechipiri yeruzhinji beta yemacOS 10.14.5 uye tvOS 12.3 yave kuwanikwa
Mini-LED inoratidzira yeApple makomputa emangwana